Tallaabo Dib Ugu Noqoshada Mashruuca Gaadhiga Cable Kartepe | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliTallaabo Dib Ugu Noqoshada Mashruuca Gaadhiga Cable Kartepe
05 / 12 / 2019 41 Kocaeli, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, TELPHER
dib uguma noqonin mashruuca xadhkaha kartepe
Mustafa Kocaman, Duqa Degmadda Kartepe, wuxuu kula kulmay madaxa 32 hoolka shirarka ee degmada. Duqa Magaalada Kocaman T Mashruuca xarig-jarka ee loo qorsheeyay in laga dhiso magaalada Derbent ayaa ah mashruuc la daryeelay oo la waayey sanado badan. Waxaan ku dul taaganahay si sax ah. Joojinta qandaraaska ayaa ah talaabo muhiim ah howshan maadaama aysan fulinin shuruudaha shirkada hada jirta. ”
Mustafa Kocaman, Duqa Magaalada Kartepe, wuxuu la kulmay kuxigeenada badhasaabyada, maareeyayaasha unugyada, Hüseyin Türker, Madaxweynaha Ururka Kartepe Mukhtars, iyo madaxa 32 ee deriska. Duqa kulanka ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee Duqa Magaalada Kartepe Duqa Kocaman, isagoo bixinaya macluumaad kusaabsan shaqada laga qabtay Kartepe oo dhan, wuxuu dhagaystay codsi iyo dalabyo.
Duqa Kocaman wuxuu kajawaabay su'aalaha ku saabsan Mashruuca Ropeway: Waligeen ka fikiri mayno dhiibida iyo talaabo qaadista. Howshu way socotaa sidaad ogtahay. Waqtigii hore, waxaan joojinay heshiiska maadaama hindise-bixiyuhu uusan bilaabi karin shaqada dhismaha inkasta oo muddada dheer lagu daray. Xitaa tani waa tallaabo muhiim u ah howshu inay sii socoto. Kooxdayada farsamada waxay sii wadaan inay u shaqeeyaan sida ugu dhakhsaha badan. Waan kula socodsiin doonaa inta howshu socoto. Waxaan rabaa in ay noloshu noqoto isla marka aad jeceshahay ”. Dhamaadkii kulanka, oo ay weheliso simit iyo shaah, muhaajiriintu waxay la wadaageen hamigooda iyo talooyinkooda waxayna u mahadceliyeen Duqa Magaalada Kocaman.
Khariidadda ugu horeysay ee mashruuca kaararka telefoonka ee Kartepe 10 Horyaalka December
Xisaabinta waxay bilaabatay mashruuca Marmaray
Mashruuca tareenka degdegga ah ee Nevşehir-Antalya ayaa bilowday
Mashruuca Madaarka ee Ordu-Giresun
Dib ugu noqo Metrobus
Xaaladda dhibaatada ee IZBAN oo lagu xalliyay: Midowga 'talaabo' shuruud ah!
Mashruuca Gawaarida Dabka ee Derbent